Degdeg:- Boob kadhan ah dukaamada Somalida oo hadda kasocda dalka Koonfur Africa. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDegdeg:- Boob kadhan ah dukaamada Somalida oo hadda kasocda dalka Koonfur Africa.
Degdeg:- Boob kadhan ah dukaamada Somalida oo hadda kasocda dalka Koonfur Africa.
August 15, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 1
Kooxo Burcad Koonfur Afrikana ah ayaa boob kula kacay Ganacsiyo oo qaarkood ay Soomaali leeyihiin oo ku yaalla deegaanka lagu Magacaabo Soweto ee magaalada Johannesburgee dalkaasi Konfur Afrika
Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa sheegay in boobkaasi uu ka dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen ganacsade iyo macamiilkiisa isla markaasna ay ka caroodeen dadka degaanka taas oo keentay in ku dhowaad boqol dukaan la boobo.
Sidoo kale waxaa la sheegay in Soomaali iyo Itoobiyaan ganacsato ah uu dhaawac kasoo gaaray iska hor imaadkaas ka dhacay eegaanka lagu Magacaabo Soweto ee magaalada Johannesburgee dalkaasi Konfur Afrika.
DEG DEG:Madaxweyne Deni oo Seeftiisa Galka Kala Baxay Xilalka Qaadis Weyn
Dadka soomaaliyeed ee RISQIGA ka raadiyey meesha uu dadkeedu saas yahay ayagaaba ah dad aad u fakar gaaban.Way ogaayeen in ay dadkaasu yahiin dad Cawaana oo an xataa aqoon Ilaaha abuuray kuu yahay iyo sababaha loo abuuray toona.Say ila tahay waxaa ayana khatar ku jira kuwa soomaalidaa oo Nayroobi ka dhistay daqayada oo xoolaha aad u badan galiyey wadan uu dagaal kala dhaxeeyo.Soomaali badan ma fakaraan oo waa indho ku arag kaliya.